Hery Rajaonarimampianina : « AOKA HIJORO… » -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : « AOKA HIJORO… »
Hery Rajaonarimampianina : « AOKA HIJORO… »
16/01/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Samy manana ny maha izy azy ny fitantanana ny firenena sy ny fitantanana ny fiangonana. Na izany aza dia afaka mifameno izy ireo. Samy vahoaka no hoentina. Samy iharan’ny fanejehana ny mpitondra azy. Samy miady amin’ny fahalovana ihany koa. “ Mila miady amin’ny kolikoly , tsy fandriam-pahalemana isika. Ny kristianina no tokony ho lohalaharana amin’izany ary tsy tokony ho menatra amin’izany finoantsika izany isika. Aoka isika sahy hijoro…”, hoy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony nandritra ny fotoam-pivavahana lehibe nataon’ny Fjkm tetsy amin’ny Coliseum Antsonjombe.
Tamin’io fotoana io mantsy no nitondrana am-bavaka ny filohan’ny Fjkm vaovao. Tonga nanotrona izany koa ny filoham-pirenena sy ny ankohonany.
Nomen’ny fiangonana Fjkm baiboly miisa roa ny filoham-pirenena. Izy io dia mariky ny “fiadiana” na “apinga” ho an’ny filoham-pirenena entiny mandresy ny ratsy rehetra. “ Efa manana ny fiadiana isika. Misaotra tamin’ny fiadiana nomenareo”, hoy ny fisaorana nataony. Midika zavatra be dia be moa iny “fiadiana” nomen’ny fiangonana Fjkm ny filoha Hery Rajaonarimampianina iny. Mahatsapa ny ady mafy atrehin’ny filoham-pirenena ny fiangonana Fjkm ka iny no fiadiana tsara indrindra hitan’ny fiangonana fa mety aminy.
“Mitovy ihany ny andraikitra nankinina tamintsika sy ianao andriamatoa filohan’ny Fjkm. Samy mitondra vahoaka. Aza kivy na dia betsaka aza ny mpanenjika. Izahay koa dia tratran’izany foana”, hoy ny filoham-pirenena, raha nampita hafatra ho an’ny filohan’ny Fjkm Irako Andriamahazosoa Ammi.
Tehaka mirefodrefotra moa no nasetrin’ny mpino Fjkm tamin’izany fandraisam-pitenenan’ny filoham-pirenena izany ary nanakoako eraka ny Coliseum mihitsy. Nasehon’ny filoham-pirenena tamin’io fotoana io ny maha olon’ny finoana azy. Tsy misy ny maha ratsy ny fanampiana ny fiangonana hoy izy, satria dia vokatra tsara no andrasana amin’izany. Manamora ny asan’ny filoham-pirenena izany. Nambaran’ny Filoha ampahibemaso teo koa fa vonona ny hanampy ny fanatsarana ny fitoriana ny filazantsara ny tenany. Tsy amin’ny maha filoham-pirenena azy ihany fa amin’ny maha kristianina azy koa. Isan’ny asa goavana ataon’ny fiangonana Fjkm, anatin’ny efa-taona ho avy, moa ny fametrahana fiangonana any amin’ireo kaomina miisa 407.
Spamming Tools dans Rallye ASACM : Mathieu intraitable de bout en bout !
Beginner Guides dans Ac felis quis tortor malesuada pretium ellente
logiciel d'automatisation zennoposter dans Tsy nahomby teto Antananarivo-HAMBOLY KORONTANA ANY MAHAJANGA NY MLE
EDM Fireman dans L’incendie du Rova de Manjakamiadana, 20 ans plus tôt
Shop dans Fivoriamben’ny firenena mikambana: NISOKATRA HO AN’I MADAGASIKARA NY VARAVARANA
Andry Rajoelina : Naka mpanolontsaina mpiaro « homo »
Azo ambara ho fandresena goavana azon’ireo antsoina amin’ny teny vahiny hoe « homosexuel » ny fisehoana nataon’i Andry Rajoelina tamin’ny 26 Janoary lasa teo tany Frantsa. Isan’ireo handrafitra ny ekipan’ity lehiben’ny mpanongam-panjakana ity mantsy ilay ...Tohiny
Minisitra Rolly Mercia : Niantso fitoniana ho an’ny mpanao gazety
Claudine Razaimamonjy : Naiditra hopitaly noho ny hamafin’ny tsindry tamin’ny fanadihadiana
Vahoakan’ny Tsihombe : Manohana ny fampandrosoana
Kandidà 26 : “Sokafy ny lisi-pifidianana…!” “Atsangano ny CES…!” « Olona higadra no hatao filoha… ? »
Spamming Tools: F*ckin’ amazing things here. I am very glad to see your article. Thanks a lot and i'm looking forward to…
Beginner Guides: You made some decent points there. I did a search on the subject and found most persons will agree with…
logiciel d'automatisation zennoposter: Cliquez sur le bouton « Créer un site Web ».